Igbo, John: Lesson 061 - Kraist dị adị tupu Abraham (Jọn 8:48-59) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 061 (Christ exists before Abraham)
g) Kraist dị adị tupu Abraham (Jọn 8:48-59)
48 Ya mere ndi-Ju zara ya, si, Ọ bughi na ayi onwe-ayi ekwughi na Gi onwe-gi bu onye Sameria, ì nwe-kwa-ra mọ ọjọ? 49 Jisus zara, si, Mu onwem enweghi mọ ọjọ: kama anamim asọpuru Nnam; 50 Ma achọghị m otuto m. E nwere onye na-achọ ma na-ekpe ikpe.
Jizos wepuru ndi nkpuchi nke ndi Juu a site n'igosi ha nkwekorita ha na mo nke Setan na ileghara eziokwu anya.Mgbe agha a gasịrị, a manyere mmụọ ọjọọ ahụ ka ọ pụta n'èzí. Kama icheghari na iru uju ha, ha gosiputara nmekorita ha na ekwensu. Ha kwetara na ha ekwuluwo site n'ịgọnahụ na mmụọ nsọ mụọ Jizọs. Ha kpọrọ ya onye Sameria site n'ọgbụrụ ahụ, n'ihi na ozi ọma banyere mmasị Sameria ahụ ruru Jerusalem, bụ nke mere ka ndị Juu na-akpa ókè agbụrụ na-ewe iwe.
Otu otu maara banyere ntọala ndị Juu nke Jisọs ma kwusi ike na ya bụ onye Juu n'ezie. Ma ndị ọzọ siri ọnwụ na ya na-arụ ọrụ ebube na enyemaka ekwensu. Ndị mmụọ ọjọọ ahụ amaghị banyere ọnọdụ ha n'ezie, kama ha kwuru na Onye Nsọ nke Chineke nwere mmụọ ọjọọ. Ya mere, nna nke okwu ugha gbaghariri obi ha ka ha we me ka ocha dika oji na oji dika oji.
Jisos zara ndi a kpuru ìsì ime mmuo, si, "Odigh Setan di nime m: Mu onwem juputara na Mo nso, odigh ihe ojo obula nacho m ka ochicho nke uwa mejuputa m n'eme ihe nke uwa. Ajujuwo m onwe m ma kwanyere Nna m otuto, nke a bu ofufe m kwesiri ntukwasi obi m na-ekwuputa aha Chineke, ma doo Nna m nsọ site n'omume m Ee ee, m na-ekpughere eziokwu Chineke nye gi, ma i na-asua m, n'ihi na ikwuputa na Chineke bu Nna m, mọ ojoo nime gi achoghi ime ka gi buru Mo Nso nke Chineke ka i we ghara ibu umu nke Onye Nsọ, ya mere gi onwe gi na-ekwulu m ma gwa m ka m nwua. N'ihi na ọ bu Onye-nwe-ayi ka m'nēkpe ikpe: n'ihi na ọ bu Onye ahu Nke nāchọ Onye ahu Nke amuru site na Mọ Nsọ ka Ọ nādabà n'ikpe Chineke. mmụọ ọjọọ dị n'ahụ ndị jụrụ, na-egbochi ha ịnata Onye Nzọpụta."
51 N'ezie, n'ezie, asim unu, Ọ buru na onye ọ bula edebe okwum, ọ gaghi-anwu ọnwu ma-ọli. 52 Ndi-Ju si Ya, Ub͕u a ka ayi mara na I nwere mọ ọjọ. Abraham nwuru, na ndi-amuma; i we si, Ọ buru na onye ọ bula edebe okwum, ọ gaghi-anwu ọnwu ma-ọli. 53 Gì onwe-gi ka nna-ayi Abraham, onye nwuru anwu? Ndị amụma ahụ nwụrụ. Ònye ka ị na-eme onwe gị?"
Jizos nyere nchikota nke ozioma ya, nekwu - "ndi nile ndi nuru okwu ya, nabata ha ma debe ya n'obi ha, ghachuta na okwu ndia gabu ihe di ike na ndu ha .. ha geweta ndu ebighebi ma ghara ila n'iyi. ga-abụrụ Chineke Nna ha ọnụ ụzọ, ọ bụghị n'ihi ịdịmma ha, kama n'ihi na okwu Kraịst na-adị n'ime ha. " Ị ghọtara ụkpụrụ a nke Alaeze Chineke? Ndị niile na-adịghị edebe okwu Jizọs n'ime obi ha dabara na mmehie na ọchịchị Setan. Ndị na-edebe Oziọma na okwu ya na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.
Ndị Juu na-kpaliri na iwe, na-eti, "Ị bụ Setan, na ị na-agha ụgha. All ndị nna ochie nke okwukwe nwụọ. Olee otú ahụ nwere ike ị na-ekwu na gị okwu inye ndu ebighi-ebi ndị kweere na ị? Ị mma karịa Onye Okike , ebe ọ bụ na ị na-enye ndụ bụghị biri site ọnwụ? ị ukwuu karịa Abraham, Moses na Devid? Ị nwere meziri onwe gị."
54 Jizos zara, si, Ọ buru na Mu onwem enye Onwem otuto, otutom bu ihe-efu. Ọ bụ Nna m na-enye m otuto, onye ị na-ekwu na ọ bụ Chineke anyị. 55 Unu amaghi Ya, ma Mu onwem mara Ya. Ọ bụrụ na m sịrị, 'Amaghị m ya,' m ga-adị ka gị, onye ụgha. Ma amaara m ya, ma debe okwu ya.
Ji nwayọọ gwa Jizọs okwu, ma kpughee ihe kachasị mkpa ya. Ọ bụ Kraist ahụ adịghị achọ otuto maka onwe ya. Ọ dị ebube site na okike. Chineke na - emesi otuto nke Okpara ya ike, dika Nna di nime Okpara, site na ya ka ekwuputara Nna nke Chineke. Ee, ndị Juu kwuru na Onye kachasị ihe niile bụ Chineke ha, mana ha amaghị Ya n'ezie. Nna ha bụ Setan na-ezo onwe ya n'okpuru "aha Chineke," na-eji aha ahụ eme ihe n'eghaghị ụgha. Ha na-eme ka ha dị nsọ, ma ha enweghị mmụọ nke ịhụnanya. Onye mara na Chineke huru n'anya dika Chineke huru ya n'anya. N'ihi nke a, okpukpe ọ bụla nke na-ekwu na nanị ijide aha ahụ bụ "Chineke" zuru ezu, ọ dịghị egosi na ọ bụ ezi ụzọ nke ndụ; nkwenye dum nwere ike ịbụ na-ezighị ezi. Chineke bụ Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Ihe niile e ji mara na aha aha Chineke bụ nke okpukpe ndị ọzọ na-ekwu abụghị ihe ọzọ karịa echiche ndị mbụ. Eziokwu nke Chineke dị n'otu nke Atọ n'Ime Otu. Ya mere, Jisos baara ndi Ju mba, si, "Unu amatagh Ya, ndu unu na echiche unu nebe na okwu ugha. N'otu oge ahụ, Jizọs kwusiri ike na ọ maara Chineke Nke Ebighi Ebi. Ọ bụrụ na nke a abụghị eziokwu, ihe akaebe ya na Nnahood gaara abụ ụgha. Ma Jizọs kwusaara ndị Juu ụdị onyinyo Chineke.
56 Nna-unu Abraham ṅuri ọṅu ihu ubọchim. 55 Ya mere ndi-Ju siri Ya, I b͕aghi ọgu arọ abua na iri, Ì huwo kwa Abraham? 58Jisus si ha, N'ezie asim unu, tutu Abraham abia, ọ si, "+ 59 Ya mere, ha buuru nkume iji tụọ ya nkume, + ma e zochiri Jizọs, o wee si n'ụlọ nsọ ahụ pụọ wee banye n'etiti ha, wee si otú a gafere.
Mgbe Jizos gwasiri ndi Ju na ha amagh ezi Chineke, na ike nke ha na-eme ka ha buru ndi ozo bu Setan, o mechara site n'igosi ya ebighi ebi, ka ha nakwere ma obu ju ya. O kpughekwara chi ya site na ihe atụ site na Abraham, onye ọsụ ụzọ nke okwukwe. Site na nke a, Jisos gwara anyị na Abraham biri na Chineke nakwa na o ṅụrịrị ọṅụ ịhụ ka ọhụụ nke Kraịst; n'ihi na site na ya, nkwa ekwere Abraam mezuru na nkpuru ya gabu ngọzi nye mba nile.
N'oge a, ndị Juu bụ ndị anya, si, "Ị bụ nwa okorobịa na nwa ma na-ekwu na ị hụwo Ebreham bụ onye dịrị ndụ puku afọ abụọ tupu mgbe ahụ? Your obi ga na-arịa ọrịa."
Jizos zara ya dika ikpe eze, " Tupu Ebreham amalite, mu onwem." Ọ kwadoro nkwupụta a site n'ịgbakwụnye, "N'ezie, n'ezie, ana m asị gị," ka ha ghọta na ọ bụ Chineke ebighi ebi, dịka Nna ya bụ. Tupu nke a, Onye Baptist ekwupụtawo mgbe ebighị ebi Kraist. Otutu eziokwu a ka ndi mmadu mehiere, ha ekwenyeghi na mmadu puru ibu Chineke ebighebi.
Ha mesoro àmà nke Kraist dika nkwulu, agha megide Chineke, tinye kwa ihe siri ike; nke mere na ha agaghị echere ikpe mkpekpe ma jiri nkume tụba ya. Mgbe ha na-achọ ịtụfu nkume ndị a, ọ hapụrụ n'etiti ha. Anyị amaghị otú. Oge hour Ya abiaghi. Ọ hapụrụ n'ọnụ ụzọ ámá ụlọ nsọ ahụ.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-efe gị ofufe; gi onwe-gi bu Chineke ebighi-ebi, onye kwesiri ntukwasi-obi na onye ezi omume, juputara n'amara I dighi achọ otuto nye onwe gi, ma i na-akwanyere Nna m nani. Naputa anyi site na mpako nile, ka anyi wee ghara idaba n'ime nmehie Setan. Nyere anyi aka ka anyi doo aha Nna ayi nso n'eluigwe, ma nata site n'okwukwe na ndu ebighi ebi.
Gịnị mere ndị Juu ji chọọ ịtụ Jizọs nkume?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:15 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)